Mandrisika ny Kazaka Hiteny ny Tenindrazany Ilay Mpihira Italiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2012 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, polski, English
Manao onjana mozika any Kazakstana ny teratany Italiana, Son Pascal, mpihira sy mpamorona. Nanefy ny lazany teo an-toerana tamin'ny alalan'ny famadihana ho karazana hanihanin'ny hiran'i Sting “Lehilahy Anglisy any “New york” i Pascal, izay tsy ampy iray taona akory izay no nahatongavany eto Kazakstana.
Nahangona mpijery maherin'ny 200.000 tao amin'ny Youtube ny hirany “Englishman in Shymkent” “Lehilahy Anglisy any Shymkent” , tanàna iray any atsimon'i Kazakstana,ary nanjary hira maro mpitady indrindra amin'ny rakikira eo amin'ny google.kz.
Nanjaka tanteraka ny lazany tamin'ity lohataona ity tany amin'ny firenen'i Azia afovoany rehefa notohizany ilay hira miaraka amin'ny gadona tsara “Tokony hiteny Kazaksha ianao”. Hira fohy ao amin'ny seha-pifaneraserana fizarana lahatsary ity hira ity, narindran'i Alen Niyazbekov, ary noraisin'ny haino aman-jery Kazaka.
Nahazo namana ambony toerana ihany koa i Pascal noho izy niangavy ny Kazaka sy ny hafa hiteny ny fiteny eo an-toerana. Ny mpanao politika eo amin'ny firenena, isan'izany koa ny Filoha Nursultan Nazarbayev, izay mitaraina matetika mikasika ny haratsian'ny fisarihan'ny fiteny Rosiana sy ny kolontsainy, ary miteny matetika ny filàna manao misimisy kokoa mba hanandratana ny fampiasana ny teny Kazaka eo amin'ny sehatry ny firenena.
Tafaresaka tamin'i Son Pascal ny Global Voices Online tamin'ny herinandro lasa ary nametraka fanontaniana vitsivitsy taminy mikasika ny fitiavana ny zavatra Kazaka.
Global Voices (GV): Niaraka tamin'ny “Tokony hiteny Kazaksha ianao” dia namoaka ihany koa ny andian-tantara “Паскальжан”(Paskaljan), horonantsary novokarina tao an-toerana izay ahitana anao miara-mianatra amin'ireo mponina amin'ny aterineto ao anatinà lalao sy zava-tsy nomanina. Inona no nahatonga anao hianatra Kazaka? Mora sa sarotra raha oharina amin'ny fiteny hafa?
Son Pascal (SP): Tsy dia hoe tena efa nianatra Kazaka aho, fa miteny kely fotsiny, tsy dia hoe sarotra akory izy oharina amin'ny teny Rosiana, fa ny hoe izy tsy dia misy mampiasa amin'ny andavanandro [Ny teny Rosiana no be mpiteny ho fiteny voalohany any Kazakstana] no mahatonga azy ho ela vao hay amiko.
GV: Oviana ianao no tapa-kevitra hijanona ka hanoratra hira any Kazakstana?
SP: Nanapa-kevitra ny hijanona aho raha vao tsapako hoe hahita tsena tsaratsara kokoa amin'ny tsenanareo, ary tena tiako mihitsy ny mipetraka any Almaty [tanàna lehibe indrindra any atsinanan'i Kazakstana].
GV: Nanjary nalaza be teo amin'ireo mpampiasa aterineto ny “Tokony hiteny Kazaksha ianao”. Inona no tena hevitr'ilay hira?
SP: Tena mora kely mihitsy ny nahaterahan'ity hira ity – Nihinana shashlik [kebaba atono amin'ny vy] niaraka tamin'ny namako Gallardo [mpanao rap Kazaka hita miaraka aminy eo amin'ny lahatsary] aho ary nidobodoboka niaraka tamin'ny ukulele-ko izahay [fitaovana nasionaly Kazaka]. Ataoko fa zava-dehibe hoan'ny firenena iray ny tsy manadino ny kolontsainy sy ny foto-piaviany, toy ny hoe reharehako ny maha-Italiana ahy, ka ianareo koa ry namana, tokony ho reharehanareo ny maha-Kazaka anareo.
Son Pascal mitendry yhe dombra [fitaovana nasionaly Kazaka].”Tsy afaka manao ny hiram-pirenena Kazaka aho, fa afaka mitendry izany,” hoy ity mpanakato tanora ity tamin'ny Global Voices Online. Sary manokana nahazoana ny fanmezàn-dàlan'ny mpanoratra.
GV:Zava-dehibe toy inona ny mozika aminao ka hoe ahafahana mitahiry ny fomba fiteny iray?
SP: Literatiora ny mozika amin'ny endrika hira na opera, izay isan'ny zavatra iray manampy amin'ny fiarovana sy ny fanapariahana ny fiteny. Mety hoe tsotra be izany, toy ny tononkalon'i Abay [Poeta Kazaka malaza i Abay Qunanbaiuli, tamin'ny taonjato faha 19] ary mety halaza ihany koa izany, toy ny hiran'i Beibit Korgan [mpihira malaza eo an-toerana] na koa aza hoe ny an'i Son Pascal!
Ity lahatsoratra ity dia isan'ny lahatsoratra avy amin'ny Tetikasa Anatiny an'ny GV Azia Afovoany ao amin'ny Anjerimanontolo Amerikana an'i Azia afovoany any Bishkek, Kyrgyzstan.